ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #193 by PAYSON
Ngafunda futhi anamathela "funda Ukungilandela" I-Connie Rikoooo sika. Angazi kanjani esekwazi ukundiza, futhi ngokusobala, ukwenze kahle. Ngaya CalClassics, kodwa zonke izindiza 2004, 2000, futhi 98. Angazi fly lutho kodwa izinto fsx, ngaphandle ukulwa ke Ngingumfana pretty okuningi umfana Ubisoft. Siyabonga, nakuba. Ngiyakwazisa ngempela usizo lwakho. (I-Electra KULUNGILE)